Intel wuxuu sharad ku galay CPU-yada loo iibiyay Motherboard-ka | Laga soo bilaabo Linux
Waxay umuuqataa in mudooyinkii ugu dambeeyay waxa kaliya ee aan dhiibo ay tahay war xun, laakiin majiro, taasi waa sida ay wax yihiin. Maanta waa inay la xiriirtaa isbeddel ku habsaday adduunyada software iyo qalab labadaba waxayna ku saabsan tahay kororka aaladaha loo xiray isticmaaleha, aan kuu sharaxo.
Ilaa hada, soosaarayaasha Motherboard-ka waxay ka soo saaraan Motherboard-kooda Chipsets-ka la heli karo, ama Intel ama AMD naqshadaha, laakiin kuma jiraan processor-yada (CPU-yada), oo mar dambe lagu daro kuwa isticmaala dhamaadka ama isticmaalayaasha. Isku-duwayaasha OEM, sida ku xusan danahooda, miisaaniyaddooda, iwm, si fiican, ugu yaraan illaa inta ay Intel ka walwalsan tahay, tani waxay ku dhowdahay inay is beddesho, sida uu xaqiijiyay Adrian Kingsley-Hughes shalay maqaal lagu daabacay Zdnet, oo xaqiijinaya wararka xanta ah ee arrintan ku saabsan, oo ku wareegaya shabakadda in muddo ah.
Isbedelka waxaa loo qorsheeyay inuu ka dhaco gelitaanka suuqa 14-nanometer processor ka oo la soo bixi doona magaca lambarka Broadwell, oo leh qaab dhismeedka BGA (Ball Grid Array), kana duwan kan hadda LGA (Land Grid Array). In kasta oo aan wax macluumaad ah laga haynin arrinta laga heli karo barta rasmiga ah ee Intel, sida lagu daabacay bogga PC Watch, muuqaalka taxanaha Broadwell waa inuu dhacaa rubuca koowaad ee 2014.
Hadda, maxay ka beddelaysaa LGA una beddelay BGA. Baakadaha LGA ee hadda la isticmaalo waxay u oggolaaneysaa in lagu dhejiyo god ama haddii kale, si toos ah loogu iibiyo guddiga, halka baakadka la soo jeediyay, BGA, looguma talagalin in lagu rakibo god, taas oo macnaheedu yahay in processor-ku Waa in si joogto ah loogu dhejiyaa saxanka, sida hadda loo isticmaalo kiniiniyada iyo qaar ka mid ah moodooyinka laptop-ka.
Isbeddelkani wuxuu leeyahay raadad taxane ah oo noo oggolaanaya inaan sii odoroso isbeddel xag-jir ah oo ku yimaada suuqa PC desktop-ka, sida aan maanta ku naqaanno, iyadoo ay ku jirto faa'iidooyinkiisa iyo waxyeellooyinkiisa dhinacyada oo dhan, oo aan isku dayi doonno inaan hoos ku soo bandhigno.
Faa'iidada muuqata ee isticmaaleyaasha ugu dambeeya ayaa ah in qaabeynta laga heli karo iyada oo loo marayo isku-duwayaasha tafaariiqda ay soo bandhigi doonaan isku dheelitirnaan ka wanaagsan awoodda CPU iyo waxqabadka guddiga, taas oo ka dhalan doonta waxqabadka qalabka wanaagsan iyo nolol waxtar leh oo dheer. Ma aha wax qarsoodi ah qofna in qaar badan oo ka mid ah isku-duwayaashu ay qalabkooda ku saleeyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin (inta badan looxyada iyo CPU-yada) ee ay ku helaan meel qiimo ka fiican mar walba, taas oo keenta qalab gebi ahaanba aan dheellitirnayn, oo ay la socdaan matxafyada dhexda dhexe- sare on sabuurada faa'iidooyinka aasaasiga ah iyo qeybsanaan.
Faa'iidada kale ee suurtagalka ah waxay noqon doontaa hoos u dhaca la filayo ee qalabka maaddaama kharashyada wax soo saarku ay yaryihiin, maaddaama kulaylka processor-ka si toos ah Motherboard-ka ay ka raqiisan tahay in la beddelo godka ka dibna lagu rakibo processor-ka godka. Tani waxay saameyn ku dhow dhow ku yeelan doontaa isudheerayaasha waaweyn ee OEM, oo hadda ku faraxsan isbedelka.
Dhinaca kale, qasaarooyinka ayaa kala duwan oo aan la iska indhatiri karin. Marka ugu horeysa waa inaan sheegnaa mid si qoto dheer u saameyn doona modders iyo qalabka xiisaha leh, casriyeynta CPU waa dhammaatay. Mar dambe ma awoodi doonno inaanu ku iibsanno kumbuyuutar qiimo jaban mustaqbalka, oo leh maalgashi kale, si aan ugu cusboonaysiinno processor ka wanaagsan.
Faa’iido-darrada kale ee ku jirta tixgelinta ayaa ah, guud ahaan, nolosha waxtarka leh ee Motherboard-yada ayaa ka hooseysa tan CPU-yada, sidaa darteedna sida caadiga ah, markii uu Motherboard-ka jabo, waxaan fursad u leenahay inaan isla isticmaalno xusuusta iyo processor-ka, maxaa ka maqnaan lahaa sawirka mustaqbalka. Waa la arki doonaa shuruudaha damaanad qaadka cusub ee soo-saarayaashu ay ku siin doonaan Motherboard-ka + processor-ka la dhigay wixii hadda ka dambeeya.
Suurtagalnimada in la soo ururiyo qalabkeenna, oo ka mid ah qaababka aan annagu doorannay, ayaa inta badan la baabi'in doonaa, taas oo aan wax yar u ahayn dadka xiisaha leh ee ku raaxeysta tan oo aan u maleynayo inay weli yihiin qayb aan laga fiirsan suuqa.
Weli waa in la arkaa sida soosaarayaasha Motherboard-ka ay uga falcelin doonaan isbeddelkan, maadaama iyaga u gaar ah ay la micno noqon laheyd inay si aad ah ugu xiran yihiin Intel oo ah shirkad qeybiyaha CPU-yada iyo qeyb ka mid ah Chipset-ka iyo, dhanka kale, isudheerayaasha OEM oo ah macaamiil gaar u ah wax soo saarkooda, luminta Macaamiisha maanta iibsada qaybo shaqsi, beddel ahaan, cusbooneysiin ama qaabeynta qalabka cusub. Dhinaceyga, faa'iidada kaliya ee aan u arko iyaga waa yareynta suurtagalka ah ee faylalka tacliimeed ee moodooyinka wax soo saarka oo micnaheedu yahay hoos udhaca kharashaadkooda.
Beddelka wax ku oolka ah ee lagu xallin karo dhibaatadan wuxuu noqon karaa rakibaadda nooc ka mid ah godka oo u oggolaanaya kulanka iyada oo aan la alxeynin Broadwell CPUs, laakiin taasi waxay macnaheedu tahay kororka qiimaha wax soo saarka ee Motherboard-yada, waa la arki doonaa haddii Intel ay sii deyso iibinta si faahfaahsan CPU-yada loo baahan yahay.
Dhinaca kale, waa inaan sugnaa sida ay AMD uga jawaabto xaaladdan, haddii ay qaado isla dariiqaas ama ay sii wadato baakadka ay ku shaqeynayaan qalabka korontada ku xirmaya, sidaas oo kale waxay heli kartaa saamiga suuqa oo muhiim ah iyadoo ay ku kacayso modders-yada iyo iskudhafka yaryar ee aan aqbal caqabad ka timaadda Intel, laakiin marka la eego xaaladda hadda jirta ee AMD ay marayso, falanqayn kasta oo tan ku saabsan waxay noqonaysaa mid aad u mala awaal ah.
In kasta oo ay tani u muuqato inay tahay isbeddel si qoto dheer u saamayn doona fikradda kombiyuutarrada desktop-ka ah sidaan illaa iyo hadda naqaanno, haddana waxaan diidayaa inaan ka fikiro in faa iidadooda ugu weyn ay ku dhex leedahay nidaamka deegaanka hadda jira ee loo yaqaan 'scalability', inay lumayaan, markaa hadday dhacdo waxay ficil ahaan u qori lahayd xukunkiisa dilka. Aynu rajeyno inaysan dhicin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Intel wuxuu ku sharraxaa CPU-yada loo iibiyo Motherboard-ka
54 faallooyin, ka tag taada
Dhibaatadu waxay tahay in AMD aysan ku jirin xilligeedii dhaqaale ee ugu fiicnaa. Waa marki ay soo saarayaasha Chipset-ka iyo Motherboard-ka soo horjeedaan inay diidaan maxaa yeelay halkaas ayay kaga tagi lahaayeen suuq la'aan iyo wadada.
Xaaladda AMD ee khalkhalsan waxay ka dhigeysaa saadaal kasta oo aan macquul aheyn, laakiin marka la eego soo saarayaasha Motherboard-ka, macluumaad dheeri ah waa in la helaa si loo gunaanado gabagabada, jaleecada hore, tani waxay macnaheedu noqon kartaa qiimo dhimis iyaga, taas oo ku jirta xaaladda hadda jirta suuqa ma ahan wax la dayaci karo ...
Dhammaantood way soo noqdeen, weli waxaan xasuustaa boodhadhka PC-CHIPS ee 10 sano ka hor loo iibiyay sida hotcakes ee loo yaqaan 'cyber-cafe', laakiin dad badan ayaa ka baxsaday sababo la xiriira liidashada liidata ee ay haysteen. Ganacsigu wuu ku sii yaraanayaa kulamada madaxabannaan. Maanta kumbuyuutarrada gacanta lagu qaato ayaa qaab mood ah oo haddii mar uun aan cusbooneysiiyo kombuyuutarkeyga waxaan toos ugu aadi lahaa aaladda ARM. Tani waa tan, kor u qaad ama u dhin.
Waa run ... 10 sano ka hor waxaan iibsaday kombuyuutarkaygii ugu horeeyay, PCChips M810LR, wuxuu haystay processor-kiisa la iibiyay, wuxuu ahaa AMD Duron 1200+, waxaan u maleynayaa inuu dhab ahaan ahaa Duron 800 Mhz oo ay weheliso warshad. Waxaan keydsaday dhowr doolar waqtigaas runtuna waxay tahay wax cabasho ah kama qabin, waxay ahayd wax soo saar qiyaastii 8 sano ilaa aan ka fariisanayo ... laakiin waa inay wali shaqeysaa ...
PS: Waxaan ilaaway inaan xuso in marwalba aan ku isticmaali jiray GNU / Linux, waxaan ku bilaabay SuSE Linux 6.4, ka dibna Mandrake 9.0, waxaa ku xigay markale SuSE Linux 9.0 iyo 9.3, ka dib openSuse 10, ka dib waqti gaaban Kubuntu 6.10, ka dib u gudub Debian Etch oo ku dhammaada Debian Lenny Waxa kale oo xusid mudan in aan isku dayay dhawr GNU / Linux distros oo dheeri ah qaybaha tijaabada, xitaa waxaan rakibay FreeBSD iyo NetBSD inkasta oo aanan xasuusan noocyada ...
Wax yar 10 sano ka hor waxaan haystay kombuyuutar ay ku jiraan loox, waxaanan lahaa athlon xp 1900+ processor iyo vulcano 7 heatsink, xasuusta wanku waxay ahayd 256. Guddiyada pcchip-ka ee wakhtigaas dhibaatooyin badan ayaa haystay oo processor-ku wuxuu la kulmay kulayl badan, si kumbuyuutarkaas uusan u sii dheeraan.
Waan xasuustaa sidoo kale, waxaan u wici jirnay astaantaas PC-SHIT halkan tayadiisa oo liidata, haday tahay qaybaha iyo habka wax soo saarka.
Ku soo dhowow adduunka qorshayn gabow ah planned.
Haddii tan la fuliyo, waxay fursad u noqon laheyd AMD inay la wareegto xukunka CPU-yada .. Anigana dhankeyga waxaan u arkaa oo keliya cilladaha intaas oo dhan .. Intel, waad iska fiicnaan jirtay ka hor ..
Waa ila yaab aniga in AMD ay marayso hoos u dhac dhaqaale xumo maxaa yeelay dhamaan inta i taqaan iyo aniga waxaan isticmaalaa AMD, kaalay, si dhib ah uma ogi dadka isticmaalaya makarafoonada Intel.
Aad bey u xun tahay .. Anigana waxaan adeegsadaa Intel (waa midka aan sida wanaagsan ula qabsado GNU / Linux)
Gabow jadwal ah, oo fudud
Waxay kaa iibinayaan pc qabow 2-dii sano ee ugu horreysay si aadan u hagaajin karin ama uu qaali noqdo oo aad iibsato mid kale
Waxaan haystay kiis xiiso leh markii aan haystay dammaanad 2-sano ah (1 + 1 dheeri ah), oo ah Acer dhabta, maalin maalmaha ka mid ah iyada oo aan ka badnayn ama ka badan ay joojisay shaqadii. Waxaan ku iri "Waa hagaag waxaan haystaa dammaanad qaadka", taas oo ahayd layaabkeyga markii aan hubiyey inay ahayd 3 toddobaad oo soo daahday.
Kuma qanacsana taas si aan u xaqiijiyo dammaanad qaadka waa viacrusis dhan, waxaan doorbiday inaan ku bixiyo Plaza de la computación (MEX), $ 700 pesos ee darawalka adag.
Hadday tahay wax kasta oo qalbi qaboojin ah, fulinta damaanad qaadku wuxuu madax xanuun dhab ah u yahay qof walba, oo ay ku jiraan kuwa jumladleyda waaweyn, kuwaas oo inta badan ka qaata bixinta qiimaha iibka si ay u daboosho khasaaraha suurtagalka ah ee ka dhashay bixinta dammaanadaha macaamiishooda.
Naxariis Waxaan sagootinayaa Intel waxaanan salaamayaa AMD-kayga cusub oo leh Ati markaa. Waxyaabaha xun ayaa ah inay ku qasmi doonto GNU / Linux sanadkaas.
ATI, iyadoo ATI ay diyaar u tahay inay la dagaallanto maxaa yeelay ma waafaqsana Linux waxaanan kuu sheegayaa inaad tahay qof isticmaala AMD oo aad u dhib badan, waxaan rajeynayaa inaan jabiyo kombuyuutarka si aan ugu qabto mid cusub oo leh nvidia ama intel
khibrado kala duwan. walaalkay wuxuu leeyahay kombuyuutar ku saleysan AMD waxuuna ku fiicanyahay Linux.
Anigu waxaan ahay isticmaale ku faraxsan E-2 APU, oo leh darawallo bilaash ah wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa gnome-shell
Aad ayey u xun tahay, in kasta oo runtu tahay inaan jeclahay AMD, ma jecli xaaladdeeda iyo aragtideeda ku aaddan Linux. Dabcan, Phoronix waxay muujiyeen in darawalada cusub ee Mesa Gallium (bilaash) ee kernel 3.7 ee horumarka ay runti wanaagsan yihiin, ma ahan kuwo cajiib ah ama kuwa ugu fiican adduunka, sida iska cad waxay wali ka sarreeyaan Hantidhawrka, in kasta oo ay leeyihiin faa'iidada soo bandhigista dhibaatooyinka yar iyo si ka fudud loo rakibo, iyadoo sifiican waxqabad ugu qabata wax walba marka laga reebo ciyaaraha waxqabadka sare leh (GNU / Linux dhaqameedku had iyo jeer waxay ka sarreeyaan 60 fps) taas oo ugu yaraan ka dhigeysa rajo yar, maadaama waqtigaas laga yaabo inay tahay waxbaa isbadalay.
AMD kee baa ka faa'iideysan doonta fursaddaas haddii ay is muujiso? Wax fikrad ah maleh, laakiin waa inay sameysaa, oo ay si gardarro ah u sameysaa, khamaar adag ku sameysaa dhamaan safkeeda oo ay siisaa taageero dhab ah iskutallaabta, xaqiiqda, haddii ay si dhab ah u sii deyso wadayaasheeda gebi ahaanba, waxay ka qaadi laheyd culeys aad u weyn garbaha waxayna wax ka qabaneysaa dhowr ka mid ah cilladaha hada jira.
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay…
Waxaan sugayaa inaan si dhaqso ah u iibsado sawir gacmeedka maxaa yeelay xilligan waxaan ku tooganayaa Radeon isku dhafan. Waxaan hayaa AMD Phenom II x4 micro oo lagu rakibay, oo ku yaal Motherboard Gigabyte ah, waxaana weyddiinayaa:
Ma kugula talinaysaa nVidia ama ATI inay ku adeegsadaan Linux? Iyadoo la eegayo in laga dhigo mid waqti dheer soconaya oo la isku dayayo in laga faa'iideysto (haddii ay dhacdo in ciyaar dhacdo, iyo tafatirka sawir).
Dhibaatooyinka dhaqaale ee AMD ay ku socoto xilligan, waxaa jira tixraacyo dhowr ah oo ku saabsan internetka iyo mala awaal fara badan, taas micnaheedu maahan in dadku aysan sii wadin inay iibsadaan alaabada AMD, waxa dhacaya ayaa ah in hubanti la'aan ay ka jirto mustaqbalka shirkadda, sikastaba xaalku ha ahaadee, aan rajeyno inay cimilada duufaan qaadi karto maxaa yeelay waayitaanka Intel ee tartanka ugu muuqda cidna dan uguma jirto.
Marka ay timaado sameynta talo bixin, waxa aan sameyn doono ayaa ah inaan ku siiyo labo talo: hubi goobaha madaxbanaan halka ay ku cabirayaan waxqabadka qalabka, sida Tom's Hardare (http://www.tomshardware.com), in marka la eego tayada iyo waxqabadka garaafyada iyo tan kale ay tahay in la hubiyo boggaga iyo golayaasha distrooriga ee aad caadiyan isticmaasho ama aad u adeegsan doonto si loo xaqiijiyo in midka aad dooratay uu leeyahay darawallo ku habboon oo ka hor imanaya fikradaha isticmaalaha yaa horey u lahaa.
Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto.
Waxaan u maleynayaa in xariifnimada aadanaha ay tan u rogi doonto, waxaa jira kuwa naga mid ah oo aan doonaynin maraqda mar hore la shiiday, waad aragtaa, xafaayaddii waa la waayey oo waxaa lagu beddelay megaupload, kan waa la waayayaa, kan kalena waa imanayaa, caqliga xaddidan ma leh. Farxad
Iga raali noqo inaan kugu raaci waayo, laakiin waligaa miyaad bedeshay kaabtoor ku shaqeeya sabuuradda? Mise waxaad isku dayday inaad ka gudubto iibinta qashin jabinta xiriir been ah? Hagaag, isku dayga inaad kala furfurto processor-ka ayaa aad u adag, ma aha inaad xusto inaad u baahan tahay qalab qaas ah qaas ah oo la sameeyo. Tan laguma xallin software-ka nasiib darro ...
Ka waran Charlie Brown.
Ma aqaano inay ku taabatay, laakiin waxaa jirtay waqti, markii processor-yada 386SX ee jidka lagu sii daayay looxyada, qof ayaa la yimid fikrad xariif ah si loo kormeero processor kale iyadoo la adeegsanayo iibinta midka jira. Ma xasuusto sida saxda ah ee ay u shaqeysay ama waxa ay ahaayeen makaanikyadu, laakiin waxaan kuu sheegayaa sababta aan u isticmaalnay 386SX oo aan ugu baahanahay in ay noqoto DX (Waan ogahay in matxafka xisaabiyaha si gooni ah loo iibiyay, laakiin Motherboard-ka ma uusan helin booskaa banaan). Marka anigu ma arko wax waalli ah faallooyinka soo dejinaya.
Waxa aan kuu sheegayaa waxay ahayd 1990-kii.
Haa, dabcan, waan xasuustaa 386SX, laakiin hadda waxaan ogaaday in qof uu la yimid xalkaas, runti aniga mid baan ku lahaa xafiiska laakiin guddiga ayaa lahaa god ay ku rakiban yihiin iskudhiska xisaabta iyo in kasta oo ay halyeeyada magaalooyinku dhahaan , HADDII ay jireen maxaa yeelay waxaan ku guuleystey inaan helo mid waxayna la shaqeysay waxyaabo yaab leh.
Si kastaba ha noqotee, uma maleynayo inay wax fudud tahay, ama aan isbarbar dhigin tirada "lugaha" ee 386 iyo kuwa uu Broadwell hubaal yeelan doono, haddii mar horeba maanta oo ay la socdaan i7 ay u socdaan kun iyo sidaas, ma qiyaasi karo inta ay lahaan doonto iyo cufnaanta iyaga ka mid ah halkii sentimitir laba jibbaaran Alxanka noocan ah waxaa kaliya lagu gaaraa xarumaha warshadaha.
Waxaan rajeynayaa inaad saxantahay waana khaldanahay maxaa yeelay runtii ma jecli isbadalkan gabi ahaanba.
hahaha, intel ... Waan arkaa halka ay ku socdaan: ultrabook iyo qaabkaas.
Kani waa desktops-yada, waa doqonimo inaad rabto inaad iibsato processor oo loo iibiyo guddiga, AMD-na hubaal waxay ka faa'iideysan doontaa taas, waxaan dhawaan aqriyay inay runti doonayeen inay mideeyaan isla godka dhammaan moodooyinka processor-kooda.
Ha iloobin midkoodna in Intel iyo AMD labaduba ay leeyihiin milkiileyaal isku mid ah, waxay shirkad kasta gelinayaan qayb ka duwan 😛
Ma aqaano sida xun ee tani u heli karto ilaa aan dhab ahaantii ka gooyo suurtagalnimada khayaanada khaaska ah.
Haddii aan u falanqeyno si qabow, marka laga reebo kiisaska gaarka ah ee maanta cidna ma dhiseyso qalabkooda gaarka ah:
1. Laptops (iyo gaar ahaan Ultralight-ka cusub) waa kumbuyuutarro leh astaamahan, marka lagu daro in lagu daro xusuus badan, processor-ka iyo GPU-ga midna lama beddeli karo.
2. Qalabka AIO (All-in-One) wuxuu raacayaa isla isbeddelka oo aad iyo aad iyo aad u badan Atamka Atamka ayaa lagu iibiyaa meel kasta maadaama sifooyinka processor-kan ay si ballaaran u qancinayaan daalacashada Face $ hit, dirista emaylka iyo adeegsiga qolalka xafiiska.
3) qalabka minitower-ka wali lama iibinaayo!? Hadday saas tahay, layaabi maayo haddii 99% kombiyuutaradaasi leeyihiin motherboard leh GPU iyo kaarka codka isku dhafan ee ay ku darayaan processor-ka hooseeya ee dhexdhexaadka ah iyo xusuusta yar.
Ilaa iyo inta aysan sameynin qaniisadda Apple ee kaa iibinaysa mashiin leh xusuusta loo iibiyo hooyada (waa inay ahaato h. Of p. Ehhhh) iibsashada mashiin dhexdhexaad ah oo awood leh waxaan haysanaa qalab in muddo ah ...
Laabkayga is-hoosaysiiyadu waa gen 5 i1 oo waxay maamushaa KDE SC 4.9.3 oo leh kormeeraha dibedda ah (8 kumbuyuutar kumbuyuutar ah wadar ahaan) sida ilaahyada, oo waxaan haystay muddo sannad iyo badh ah wixii aan u arkona way sii socon doonaan muddo dheer. Xaqiiqdii maalinta aan beddelo waxaan iibsanayaa taleefan casri ah oo leh Ubuntu ama wax la mid ah oo aan ku xidhi karo kormeeraha iyo kumbuyuutarka oo aan illaawo weligay si aan u qaado halbawle! xD
"Haddii aan si qabow u falanqeyno, marka laga reebo kiisaska gaarka ah maanta maanta cidina ma dhiseyso qalabkeeda u gaarka ah mar dambe" ... Waan la yaabay bayaankan, maxaa yeelay dhab ahaantii, modders waxay u taagan yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah suuqa dhammaadka iyo qaybaha ugu sarreeya, iyo Ku carqaladee iyaga qaybta ugu faa'iidada badan ee suuqooda, dhanka kale, haddii aadan qaddarin raaxada ay tan ku keenayso in badan oo naga mid ah, ma mudna in laguu sharraxo.
Waa maxay waallida in magacyada loo bixiyo hipsters wax walbana, waxaan dhistay mishiinadayda 10 sano kahor intaan hanad suuqgeyn la imaan magac qabow oo loogu talagalay ragga caatada ah ee dhisa mashiinka maqaarka sare leh si uu u ciyaaro Crysis 😛
Nah, sida uu sheegay Juan Carlos, kombuyuutarrada dhaqameed ee maanta wax macno ah malahan dabcan mooyee, waxaad tahay "modder" waxaadna dhistay mishiin aan macquul aheyn inaad ku riyootid dhowr sano ka hor si aad u ciyaarto ciyaaro.
Oo yaa kuu sheegay inaan waligay PC dhistay si aan u ciyaaro? ... waan ku celcelinaa adigoon ogeyn. Haddii kombiyuutar ay la socoto 2 kaararka tuner-ka ah (1 loogu talagalay dayax gacmeedka telefishanka + HD iyo mid kale oo loogu talagalay TV-ga berriga) oo lagu daray kaarka RAID, dhammaantoodna ku jira Motherboard-ka waxqabadka sarreeya oo leh processor xoog leh iyo xusuus ku filan waa kombuyuutar loogu talagalay ciyaaraha, markaa waad saxantahay.
Raali noqo xiisaha, laakiin waa maxay ujeedka maquiahan?
Waxaan is tusay inay jawaabtu tahay mid macquul ah B)
Xaaladdan oo kale, waa inaan kuu sheegaa inaadan ahayn isticmaale dhammaad ah iyo in baahiyahaagu ay yihiin _very_ gaar ah, sida gaarka ah ee kuwa muyuusiggu yeelan karo iyo inuu ku soo ururin doono xaruntiisa shaqada kaararka codka, RT kernel iyo dhammaan waxyaabaha yaryar. in aan isticmaali karo. Mar labaad, muusikiiste noocan ah dhabtii ma ahan midka ku badan 😉
Isticmaalaha ugu dambeeya ee leh ilaha dhaqaalaha qaarkood - ama maheysto laakiin wuu helayaa- oo yaa doonaya inuu naftiisa u huro qaab xirfad leh oo maqal / muuqaal ah isla markaana aan aqoon farsamo u laheyn kombiyuutarada si toos ah ayuu u iibsadaa Mac, inta kalena maanta waxay iibsadaan AIO ama a buug yar oo leh Windows. Kuwa soo hadhay, tiro yar oo yar ayaa iibsada desktop-ka dhaqameed iyadoo ujeedadu tahay balaadhinta iyo balaadhinta mustaqbalka, waxaa lagu tiriyaa faraha hal gacan, maadaama ay u dheertahay baahidooda xirfadeed waa inay lahaadaan aqoon koombuyuutar oo heer sare ah maxaa yeelay mishiin sida midka aadan magaca u dhiibin hubka ama naagtaada duugga ah ama adeerkey, u tag oo u sharax iyaga oo ku saabsan boodboodka, khilaafaadka irq, xawaaraha basaska ...
Ninyahow kaalay, marka laga reebo xaalado aad u qaas ah, mishiinnada si fudud ugu hubaysan nasiib darro waxay qarka u saaran yihiin dabargoyn, taas oo ah laba jibbaar maxaa yeelay haddii mid ka mid ah mashiinadan qayb ka mid ah ay shaqada joojiso oo aad aqoon u leedahay baaritaanka, waad beddeshay oo voila, iyadoo AIO ama warqad qoraal ah ayaa mashiinku kaa dhacayaa ilaa ay ka soo celiyaan adeegga 😛
@josue: Ka sokow u isticmaalkeeda xarun ahaan wax kasta oo aad qiyaasi karto, waxaan u adeegsan jiray si aan ula socdo TV-ga dayax gacmeedyada iyo duubista barnaamijyada (way fiicneyd intii ay socotey sñif…), u dhoofin sawirka TV-ga sidoo kale waxaan u shaqeeyaa sidii NAS kombiyuutarada kale ee shabakada. Nasiib wanaag waqti kadib waxaan dhisay PC kale oo leh shaashad nooca desktop-ka ah halkaasoo kaararka tuner-ka ay tageen, anigoo maamulaya qaabeynta aaladda HTPC.
@msx: Hagaag, sidaa waad arki kartaa, aniga iskuma arko inaan ahay qof adeegsada astaamo aan macquul ahayn, laga yaabee inay tahay sababta oo ah inbadan oo asxaabteyda ah iyo kuwa aan is naqaano sidoo kale waxay jecelyihiin aaladaha, mudo dheerna sida kaliya ee PC lagu heli karo halkan waa dhisida mid. naftiisa ama iyada oo qof loo dhiibanayo hawsha, si dhaqanku dadka ugu yaraaday. Xaqiiqdii, guriga waxaan kaliya ku helnay warshad isku soo uruurisay PC, saldhigga HP, waxayna ahayd hadiyad ay i siiyeen. Haa, waan qiranayaa dambiga, waan jeclahay waxaas oo dhan oo ku saabsan boodboodayaasha, IRQs iyo faahfaahinta kale ee dadka kale ay hubaal u arkaan caajis.
Uma maleynayo in mashiinada hubeysan ay qatar ugu jiraan dabargoyn, waxa nasiib daro ah inay dhacdo waa inay rabaan in ay bakhtiiyaan, maxaa yeelay kooxdan oo kale waxay caadiyan socotaa dhowr sano, guriga waxaan ku haystaa mid horeyba u jiray 8 sano oo dagaalka sii wadaya, halka kuwa AIOs wali Waa la arki doonaa inta ay sii hayaan.
Weligay majeclayn in kuwa kale aniga ii go’aamiyaan, waana mid ka mid ah sababaha aan u door bidayo barnaamijyada bilaashka ah, markaa bal qiyaas sida aan u dareemo in "qof" uu doorto sida uu kombuyuutarkaygu noqon karo iyo waxa aan u baahnahay
Maxaan macno samaynaynin inaad dhisto PC-gaaga? Wax kale oo aan qabtay noloshayda oo dhan. Waxaan ku iibsadaa waxyaabaha aan jeclahay iyo halka aan ugu jeclahay, waxaanan ku raaxaystaa dhismaha munaaraddan, iyo munaarad tayadeedu sarayso oo qiimo fiican leh, ee ma ahan wax xasaasi ah oo ay halkaas kaaga iibinayaan qiimo sare.
Waxaan ka shakisanahay in qof kasta oo taas fahmaa uu iibsan doono munaarad horeyba u hubeysneyd, waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn inay taasi dhacdo. Hadaan qaldanahayna waad ii sheegtaa.
Hagaag, waxay umuuqataa inaad midkeyga tahay!… +100
Way iska cadahay inay jirto u janjeera in la doonayo in PC desktop-ka laga saaro adeegsadaha guud, kaasoo lahaa taleefannada gacanta, kiniinno, netbook, ultrabook, buugaagta xusuusta, ama oliwan «PC-yada» iyo ciyaartooyda wiilasha, playstation, xbox, iwm.
Si kale haddii loo dhigo, fikraddu waxay tahay in kumbuyuutarku yahay qalab la isticmaalo oo loo beddelo mid kale markii uu duugoobo, dadkuna ay ku nool yihiin guryo yaryar iyo kuwo yaryar, oo ay ku yar tahay kombuyuutarradu isla markaana u dhexeeya shaqada iyo waqtiga safarka. si ay ushaqeeyaan waxay ubaahanyihiin wax iyaga siiya isku xirnaansho waana la qaadi karaa
"Waa iska cadahay inay jirto u janjeera inaad rabto in laga saaro kumbuyuutarka kumbuyuutarka adeegsadaha guud,"
Muxuu aasaas u yahay aragtidaas shirqoolka ah!?
Waxaan u maleynayaa inay jirto baahi dhab ah oo loo qabo in la isticmaalo aaladaha la qaadi karo oo ay ku xiran yihiin adeegyada daruuraha, ugu yaraan shaqsi ahaan kiniiniga / kumbuyuutarka casriga ahi wuxuu xaliyaa qayb wanaagsan oo ka mid ah shuruudaha xisaabinta ee ah isticmaalaha dhamaadka.
Awoodda ay leeyihiin qalabkani, waxay noqoneysaa mid aad iyo aad muhiim u ah in la helo kumbuyuutar kumbuyuutar ah, in kasta oo aan waligeed la beddeli doonin - uguyaraan isticmaalka aaladda kormeerka weyn iyo kiiboodhka dhabta ah - Tallaabada Intel wax badan kama qabanayso si loo raaco jihada suuqa, si sii kordheysa saameyn ugu leh iibsadayaasha ogeysiiska ah iyo kuwa la wargaliyay.
Uma maleynayo in qofna doonayo inuu naga iibiyo wax kasta oo prepo ah, liddi ku ah, mar kasta oo shirkad tiknoolajiyad ah ay rabto inay wax uun sameyso taas marwalba way qaldantaa, maanta dadku aad ayey uga tiro badan yihiin ugana war roon yihiin sanado ka hor mana doonayaan inay lumiyaan lacag aad kuugu kacayso inaad waxbadan ka kasbato badeecado aadan u arkin inay ku habboon yihiin ama waafaqsan baahidaada ama dhadhankaaga.
msx Waxaan u maleynayaa inaad si khaldan u tarjumeyso micnaha ereyadeyda, waxaan ula jeeday xaqiiqda inay jirto "u janjeera" in laga takhaluso pc-ka, oo ay kor u qaadaan shirkadaha (hardware and software (win8 gnome3)) oo ay dadku aqbaleen.
Gaar ahaan tan kombiyuutarrada-qalabka, halkaasoo batteriga lagu iibiyo, oo ay weheliyaan wanka iyo hadda processor-ku iima farxo, waxaan doorbidaa pc desktop-ka oo aan ku dhisi karo qaybaha aan doonayo (illaa inta ay lacagtu igu soo gaadho xddd)
"Uma maleynayo in qofna doonayo inuu naga iibiyo wax prepo ah" mmm ... waxaa jira wax la yiraahdo olole xayeysiis xddd
»Maanta dadku aad ayey uga tiro iyo aqoon badan yihiin sanadihii hore» mmm…. dadku waxay eegaan qiimaha iyo xaddiga khidmadaha ka dibna waxay ku dambeeyaan inay iibsadaan qayb kasta oo qashin ah
"Waxaan ula jeeday xaqiiqda ah inay jirto" u janjeedh "in meesha laga saaro kombuyuutarka, oo ay dhiirrigeliyaan shirkadaha (qalabka iyo softiweerka (win8 gnome3)) oo ay dadku aqbaleen."
Tan khaasatan anigu kuma raacsani wax badan, iguma muuqato aniga inay sidaas tahay, waxaan u maleynayaa inay jirto u muuqasho u janjeera in la raadsado badeecooyin la qaadi karo oo awood leh isla markaana hoos u dhigista desktop-ka waxaa loo weeciyay asalka ...
«Gaar ahaan tan kombiyuutarada-qalabka, halkaasoo batteriga lagu iibiyo, oo ay weheliyaan wanka iyo hadda processor-ku kuma farxo,»
Pfff, maahan in la xuso, miyaad ogaatay waxa Apple ku sameeyay MBP-yada cusub? Markaad iibsanaysid waa inaad ku doorataa inta xusuus ah ee aad rabto maxaa yeelay waxay kuxirantahay mishiinka !!! WTF!
"Waxaan doorbidaa pc desktop-ka oo aan ku dhisi karo waxyaabaha aan doonayo (ilaa inta lacagta la heli karo xddd)"
Shakhsiyan, maanta uma isticmaalo wax badan desktop-ka sida oo kale, taasi waa, AIO, minitower, iwm: haa, waxaan hayaa laptop 17,1 ″ ah oo aan u isticmaalo sidii inay tahay desktop oo aan sidoo kale ku xiro a LG 23 ″ kormeer aan adeegsan jiray ilaa sanad kahor desktop-ka oo hada sameeya NAS 🙂
«" Uma maleynayo in qofna doonayo inuu na iibiyo wax prepo ah "mmm ... waxaa jira wax la yiraahdo olole xayeysiis xddd»
HAHA, haa waad saxantahay, sidaad u aqrisay waxay u muuqatay nacasnimo sidaan u qoray xDD
Waxa aan ula jeeday waxay tahay aniga ilama aha inay doonayaan inay wax naga iibiyaan iyagoo wax kale ku beddelanaya, taasi waa, aniga iima muuqato inay wershaddu si gaar ah u raadineyso dhimashada desktop-ka, desktop-ka wuu sii xumaanayaa muddo dheer ilaa iyo inta aan ka heleyno saacad-wada jir In One si uu noo tuso shaashad holograafiga ah (!!!)… okay, ma ogi haddii aan waligeen arki doonno shaashaddaas, laakiin si tartiib ah ayey u dhiman doontaa, saxiix.
»Maanta dadku aad ayey uga tiro iyo aqoon badan yihiin sanadihii hore” mmm…. dadku waxay eegaan qiimaha iyo xaddiga khidmadaha ka dibna waxay ku dambeeyaan inay iibsadaan qayb kasta oo qashin ah
Waan oggolahay, laakiin waxaan ku dhiirran lahaa inaan dhaho tani waxay ka dhacdaa in ka badan wax kasta oo halkan Latin America ah oo meesha qashin-tuurku had iyo jeer yimaado.
Haddii aad waligaa fursad u yeelato inaad ka daawato telefishanka dalal kale (Yurub, Australasia, USA & Canada) waxaad layaabi doontaa xayeysiisyada laxiriira barnaamijyada softiweerka ama teknolojiyadda ee jira, intaas kaliya maahan, laakiin sidoo kale boggaga go'an ee wararka ka hadlaya softiweerka, qalabka , iwm
Xumaan ama xumaan ka jirta wadamada goboladaas bulshada guud ahaan ayaa wax yar ka caado u leh la macaamilida tikniyoolajiyadda iyo qalabka kombiyuutarka guud ahaan awood badan * waa * aad looga heli karaa halkan Latin America halkaasoo canshuuraha soo dejinta, canshuuraha canshuuraha iyo kuwa kale ee dheeriga ahi ay yihiin isu beddela waxyaabo walaaq leh 😛
Tusaale ahaan, MBP Retina (oo aan aheyn retina maxaa yeelay ma gaarto xalka retina laakiin waxay u kobciyaan sida oo kale), taas oo adduunka intiisa kale ku qiimeysa $ 2700 halkan Argentina, moodel leh noocyo yar oo si fudud ugu kacaya $ 4200, waxaan ula jeedaa u $ s1500 dheeraad ah, marka laga reebo in 2700 oo cagaar ah meel kasta uu yahay mataano wanaagsan laakiin qofkii haysta mushahar fiican hubaal wuu iibsan karaa, halkan Arg. u $ s4200 lama geli karo 97% dadka, asal ahaan waa waalli markay tahay mushaharka iyo qiimaha nolosha.
Muhiimadu waxay tahay iyada oo awooda buug-yaraha ay hadda haystaan, umuuqato inaysan macno badan samaynaynin inaad ku wareegto isku xirka kumbuyuutarka PC-ga Kii iigu dambeeyay ee aan dhisay wuxuu ahaa 5 sano kahor (noloshayda weligay ma iibsan munaarad hubeysan), ilaa aan ka iibsaday Acer-kayga, oo ay hadda gacanta ku hayso gabadhaydu, haddana la joogta Lenovo. Runtu waxay tahay inaanan seegin "hulk" gebi ahaanba, haddana hadda waxa kaliya ee aan u isticmaalo waa inaan siiyo naadi iyo naadi leh qaybinta Linux. Hagaag, maahan hadda maxaa yeelay kormeerahaygu wuu gubtay.
Dhinaca kale, haddii aad iibsato PC hubaysan, ku dhowaad kuma kala duwanaan qiimaha, sidaas darteed waxaan doorbidaa inaan ku sii jiro laptop-ka. Kiniin? maya, waa hagaag, aniga, markaan arko toy aan runtii waxtar lahayn oo aan kula shaqeeyo, bah, wax walba, ma jirto hab ay igu qancin karaan inay waxtar leeyihiin wax kasta.
Weli waxaa jira farqi aad u weyn oo u dhexeeya aaladaha la qaadan karo iyo kombiyuutarada caadiga ah ee desktop-ka.
Xitaa qaybaha "loo siman yahay", qalabka kumbuyuutarka ayaa wax badan qaban doona, awoodna u yeelan kara inuu si fiican u qaboojiyo oo uusan lahayn dhibaatooyin boos.
Dhammaan waxay kuxirantahay isticmaalka aad rabto inaad siiso, maadaama ay run tahay in waxyaabaha maalinlaha ah qalab xad dhaaf ah oo awood badan aan loo baahnayn oo lagu sameyn karo laptop la awoodi karo, laakiin howlaha u baahan awood dheeri ah, laptops ayaa xal ah aad uga qaalisan desktop-ka mana bixin karo waxqabad isku mid ah.
Dhammaantood waxay ku yimaadeen waxa aan raadineyno / u baahan nahay markii aan soo iibsaneyno qalabka iyo sidoo kale caasimadda aan dooneyno / maalgashan karno. Aad ayey u badan tahay in la arko dad hela qalab la qaadan karo dhaqdhaqaaqiisa / cabirkiisa markii waxa ay dhab ahaan u baahnaayeen ay yihiin awood aysan qalabkaasi iyaga siinaynin iyo dadka iibsada “hulk, markii xaqiiqda ay raadinayeen ay ahayd dhaqdhaqaaq iyo keydinta booska iyo waxay haysteen laptop si ay u kaydiyaan.
Aniga ahaan, faa iidada PC-ga soojireenka ah ee ka baddan buugaagta wax lagu qoro iyo aaladaha kale ee mobiilku kuma jiifto awoodda, laakiin waa is-beddel. Muddo 10 sano ah waxaan isticmaalaayay buugaagta xusuusta, nasiib daro maanta ma haysto (waji aad u murugo badan) waxaanan arkaa kumbuyuutar dhaqameedka iyo kormeerka raaxo la'aan, laakiin marwalba waxaan haystaa ugu yaraan 1 PC guriga (badanaa 2), dhammaantood waa la habeeyay oo aniga ayaa isoo urursaday, oo ay ku jiraan kaararka lagu daro ee RAID-ku rakiban saxannada, kaararka tuner / qabashada, iwm., tan oo leh laptop-ka waa ficil ahaan wax aan macquul ahayn, sidaa darteed waxaan aaminsanahay in PC-ga uu sii wadi doono kaalintiisa dhexe ee nidaamka deegaanka iyo qalabka mustaqbalka dhow. muddo dhexdhexaad ah.
Micro-ka loo iibiyey hooyada oo loo iibiyey golaha wasiirada oo lagu qodbay miiska ku dheggan dabaqa guriga ... adiguna waxaad iftiimisay BIOS qalad ... fa ...
Hahaha… heer sare
Wuu dhaafay. Gudbinta facebook, gudbinta «casriga ah» (hadaad arki karto mobilka aan haysto ...), gudbitaanka «Cloud Computing», gudbitaanka kiniiniyada, gudbinta awood u la'aanta dhisida p # kombuyuutarkayga oo leh qaybaha p # c in aan doorto (qaybta ugu xiisaha badan ee casriyaynta). Waxaa dhacda in lay horseedo inaan aaminsanahay inay lama huraan tahay inaan iibsado kombiyuutar cusub 2-dii sanaba mar. Waxaan ka socdaa inaan ka warqabo gabow la'aanta barnaamijka, aad ayaan uga faraxsanahay inaan ku faraxsanaado.
Dhanka kale, nasiib wanaag, ma garanayo waxa ay ula jeedaan markay yiraahdaan iyadoo AMD aysan macquul ka aheyn gnu / linux, waxaan doortay amd / ati inta aan xasuusto. Gpu-gii ugu dambeeyay, HD6670 uma muuqan wax fiican (wax walbana hal dhinac ayuu u dhaqaaqay) markii la rakibayay Ubuntu 12.04, waxay ahayd arrin ku saabsan rakibida darawalkii ugu dambeeyay (nasiib daro lahaansho) soo saaraha.
Fikradda APU (SOC) aniga waxay ila tahay wax weyn, gaar ahaan noocyada xallinta qaarkood sida HTPCs, tusaale ahaan. Laakiin ma jecli inaan ka saaro ikhtiyaarka processor-ka caadiga ah (FX kiiskan) markii ay lagama maarmaan tahay.
Ka fog qaadashada xulashooyinka naga fog, way fiicnaan laheyd haddii ay nasiiyaan ikhtiyaarro dheeri ah, tusaale ahaan, suurtagalnimada in lagu ururiyo CPU-yada ARM
Ikhtiyaarrada xulashooyinka, xulashooyinka ... intaba waa ka sii fiican yihiin ... xaqiiqda, in (waxyaabo kale) waa waxa ka dhigaya GNU / Linux weyn (in kasta oo ay jiraan kuwa u akhriya sida kala-jajab aan fiicnayn)
hahahahahahahahaha ahhh, waa maxay boludín! xD
Mawduuc wax badan siin doona in laga hadlo ...
Xagga tayada iyo waxqabadka marka laga hadlayo Intel, waa wax aan muran geli karin. Laakiin dhibaatadu waxay u socotaa jihooyin kale, waxayna badanaa tahay kororka isticmaalka. CPU-yo badan ayaa la iibin doonaa taasna heerka ganacsigu waa mid aan la diidi karin.
Wixii hada ka dambeeya beddelka Motherboard-ka, iyadoo lagu darayo processor-ka, wuxuu noqon doonaa mid aan dhaqaale ahaan macquul ahayn. Taas macnaheedu waa qashin badan iyo isticmaalka kombuyuutarka Qof kastaa wuu faraxsan yahay.
Kama sii hadli karno qorshayn ama u aragno duugnimo, laakiin halkii laga hadli lahaa gabow xarfaha waaweyn leh.
Had iyo jeer xalal ayaa kala jiri doona, taas waan hubaa.
Laga soo bilaabo xilligan waxaan horeyba u ogaa inaanan u dhaqaaqin dhanka processor-ka Intel.
Waxaas oo dhami waa wax aan ka badnayn tallaabooyinka hanti-goosadnimada, soo saarista si dhakhso leh loo isticmaalo iyo tuurista iyo iibsashada mar kale. Soo saar oo iska tuur. Waxay sidoo kale ku dhacdaa qalabka korontada, ama telefishanka. Waxaas oo dhami waxay leeyihiin waqti in kabadan oo ay xisaabiyeen shirkadaha. In ay socoto waqti xaddidan iyo in ay jabayso oo aan wax kale ka jirin oo aan ahayn in lagu beddelo mid cusub. Jaahiliga waxaas oo dhami waa adeegsadayaasha iyo bay'ada xaalufinaysa iyo ka-faa'iideystayaasha, si macquul ah, shirkadaha. Sidaa darteed waan la noqonayaa wixii aan kor ku idhi ee ku saabsan Intel: Wax la mid ah waa inay ahaato Intel in AMDE muddada dhexe qof waliba dib u iibsado, haddii ay haystaan ​​lacag cad. Waxaas oo dhami waxay ka qoto dheer yihiin sida ay umuuqato suuragalna maaha in lagu soo koobo qoraal fudud.
sida kikilovem yahay ... sida ...
Qof kasta oo ka soo jeedda aragtidiisa waa sax, laakiin xaqiiqda ayaa ah in isbeddellada ay muujinayaan in dhaqdhaqaaqgu yahay boqornimo oo waxay noqon doontaa haddii aysan wax kale dhicin Kombuyuutarka kumbuyuutarka wuxuu noqon doonaa sida All In One uu leeyahay haddii ay run tahay in varato badani soo baxdo iyo soo saarista Motherboardyo badan oo micro soldered ah. Waxaan doorbidayaa wax kasta oo la soo ururin karo iyadoo ay ugu wacan tahay cimri dherer, kalsooni iyo is bedelid, laakiin haddii aad eegto maanta ku dhowaad dhammaan qalabka waxaa loo maleynayaa in ugu badnaan la tuuri karo 5 sano, iyadoon loo eegin nooca ama isticmaalka qalabka.
Faa'iidada ay leeyihiin kuwa inaga ah ee adeegsada Linux iyo xitaa UNIX ayaa ah inay cimri dheer siiyaan qalabka, tusaale ahaan waxaan haystaa Pentium 3 oo wata 512 RAM iyo 200GB IDE DD (inkasta oo aysan iyagu rumaysanayn) iyo Arch iyo OpenBOX wuxuu sameeyaa waxyaabo yaab leh wax badana kama weydiisto kombiyuutarka cusub.
Nasiib darrose waad ku saxan tahay waxa aad leedahay, waxaanan idhi "nasiib darro" maxaa yeelay cawaaqibyada ka imanaya isbeddelladan waxaa lagu wada bixin doonaa dhammaantood, macno ahaan, lacag adag.
tani waxay iila muuqataa sida intel u musalafsan yahay, wax ka baro dhibaatooyinka 360 oo ciyaaro 3 konsollool ah oo sanad walba lagu xoqo alxanka, haddii Intel is beddelo waxaan aadayaa AMD aniga oo aan ka fikirin maadaama ay sii wadi doonaan godka.
Hagaag, dhanka kale, waxay dhahaan waxay yareeyaan kharashaadka waxsoosaarka hadii ay yarayn karaan laakiin waxay noqon doontaa mid qaali ah aduunka oo damaanad qaadaya inay bixin doonaan kaararka aan fiidiyowga bixinayn ama aqrinin darawalka ama diskiga adag sababtoo ah iibinta qashinka. waxaa jira meesha AMD uga soo muuqan doono sidii boqor maadaama dadku arkeen dhibaatooyinkaas iyaga oo aan ka fikirin ay aadayaan AMD
Waxaan Rajaynayaa INTEL IN AAN FULQAQIN INTAY INTEL INTAY TAHAY WAAN FADLANAHAY
Skype 3.0 loogu talagalay Android